Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A May 2011 (2)
Q and A May 2011 (2)
1. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေက ခွေးတွေနဲ့ ထိတွေ့မူများရင်
2. ဒီတားဆေး သောက်တာ ၁ နာရီ နောက်ကျသွားပါတယ်
3. လက်ချောင်းလေးတွေ ကပ်ချင်သလိုလို ဖြစ်နေတယ်
4. တစ်ကြိမ်လာပြီး နောက် ၂၈-၂၉ ရက်နေရင် နောက်တစ်ကြိမ် လာပါတယ်
Q 1: ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေက ခွေးတွေနဲ့ ထိတွေ့မူများရင် ဘာဖြစ်တတ်လဲ။
• ခွေးမှာ ကူးစက်ရောဂါ မရှိရင် ဘာမှမဖြစ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ် တခြားလူဖြစ်ဖြစ် အတူပါဘဲ။
Q 2: သမီး ဒီနေ့ MICROGESTIN FE 1.5/30 TABLETS ဒီတားဆေး သောက်တာ ၁ နာရီ နောက်ကျသွားပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရပါမလဲ။ နောက်နေ့ရော ဘယ်လို ပြန်သောက်ရပါမလဲ။ ဒီနေ့ ၁ နာရီမှာ သောက်ရမှာ ၂ နာရီမှ သတိရလို့ သောက်ပါတယ်။ နောက်နေ့ ဘယ်ချိန်စသောက်ရပါမလဲ။ ဆေးသောက်တာနောက်ကျရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား။
• Microgestin FE ကို ဖတ်ပါ။
Q 3: ကျမ အမေ အသက် ၆၁ ရှိပါပြီ။ အမေက ပိန်ပါတယ်။ အခုတလော အမေက ခြေချောင်း လက်ချောင်းလေးတွေ ကပ်ချင်သလိုလို ဖြစ်နေတယ်တဲ့ နောက် ကျင်သလိုလိုခံစားရတယ်တဲ့ အဲဒါ ဘာဖြစ်တာပါလဲ။ လေဖြတ်တာတွေများ ဖြစ်တက်ပါသလား။ လိမ်းဆေး ဘာဆေးတွေ သုံးဖို့ သင့်ပါသလဲ။ သောက်ဆေးရောသုံးဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
ကိုက်တာ နဲ့ ကပ်တာ မတူကြပါ။ ကပ်တာက ကယ်လ်စီယမ် နည်းတာနဲ့ ဆိုင်တာများတယ်။ အသက်လဲကြီသူတွေ ကယ်လ်စီယမ် စားဆေး သောက်ရမယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ လိုတယ်။ သွေးဖိအား Blood pressure ချိန်ပါ။ လိုရင် ပြောပါ။ လေဖြတ်တာက သွေးတိုးများတာနဲ့ အဝလွန်တာတွေကနေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒါတွေကောင်းရင် စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ Neurobion tablet စားဆေး တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ် ကြာကြာ သောက်စေပါ။
Q 4: ကျွန်တော်က နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ် လုပ်ပါတယ်။ ဇနီး အသက်က ၄၅ နှစ် ကလေး မရှိပါ။ အရင်က ဇနီးရဲ့ Menstruation က တစ်ကြိမ်လာပြီး နောက် ၂၈-၂၉ ရက်နေရင် နောက်တစ်ကြိမ် လာပါတယ်။ အခု တစ်ကြိမ်လာပြီး နောက် ၃ဝ-၃၁ ရက်နေ့မှ နောက် တစ်ကြိမ် လာပါတယ်။
Depend upon her ages 45 years is this symbol of menopause? OR What is her problem? What is your suggestion regarding this issue? Your quick reply will be highly appreciated.
According to her age it is most likely pre-menopausal symptom. A woman will experience irregular menstrual cycles. It can be shorter or longer. Then she will have additional symptoms. Please read the following writing.
However she should consult an OG if possible to exclude non-menopausal illness.
Menopause သွေဆုံး-သားဆုံး ကို ဖတ်ပါ။